I-OSPO: Ihhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile. Umbono weQembu le-TODO | Kusuka kuLinux
I-Tanto las Izinhlangano zomphakathi (Ohulumeni) njenge Izinhlangano ezizimele (Izinkampani) njengamanje zisetshenziswa ngendlela ekhulayo neqhubekayo ye Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile. Futhi kuyo, bathola izinzuzo eziningi kubo nakwabanye abantu (izakhamizi, abasebenzisi, amakhasimende).
Ngalokhu nokunye, izinhlangano eziningi zihlala zizama ukukwenza thuthukisa ukuphathwa kwe-IT kuwo wonke Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile abasebenza ngazo noma abangazisebenzisa. Futhi umqondo omuhle kakhulu (isinyathelo / iphrojekthi) kuleyo ndlela waziwa njenge «I-OSPO (I-Open Source Program Office) ».
Kunikezwe, «I-OSPO (I-Open Source Program Office) » ngesiNgisi, u «Ihhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile» ngeSpanishi, umqondo owenziwe yi- Iqembu le-TODO (Khuluma ngokukhululekile Thuthukisa ngokusobala) ngesiNgisi, noma Khuluma ngokusobala Thuthukisa ngokusobala NgeSpanishi, sincoma ukuthi ngemuva kokuqeda lokhu kushicilelwa ufunde lokhu okufakwe ngezansi ukuze wazi okuthe xaxa ngakho:
"Iqembu I-TODO ngokuyisisekelo ibhekisa enhlanganweni ehlanganisa izinkampani ezibophezele kuMthombo Ovulekile. Ngakho-ke, i- "TODO" ingachazwa njengeqembu lezinkampani ezivulelekile ezifuna ukusebenzisana ngemikhuba, amathuluzi, nezinye izindlela zokuqhuba amaphrojekthi nezinhlelo zomthombo ovulekile neziphumelelayo. Ngaleyo ndlela, ukusizakala ngeFree and Open Source Software eyenziwe ezinhlanganweni zabo, nefilosofi yayo, imigomo nenkululeko yayo, ukuze wonke amalungu ayo akwazi ukusebenzelana, anikele futhi agcine izinkulungwane zamaphrojekthi, amakhulu okuncane." BONKE: Khuluma ngokusobala Thuthukisa ngokusobala
1 I-OSPO (I-Open Source Program Office)
1.1 Yini iphrojekthi ye-OSPO?
1.2 Imisebenzi yeHhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile
1.2.1 Ukunciphisa ubungozi kwezomthetho
1.2.2 Ukwenza ngcono imikhuba yonjiniyela
1.2.3 Ukuthola izinzuzo zezezimali
I-OSPO (I-Open Source Program Office)
Yini iphrojekthi ye-OSPO?
Ngokusho kwe- iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub, iphrojekthi «I-OSPO» Kuchazwa ngale ndlela elandelayo:
"Siqukethe ukudala iHhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile ngaphakathi kwesakhiwo senhlangano ngayinye, ukuze libe isikhungo sokwazi ukusebenza kanye nesakhiwo salo somthombo ovulekile. Lokhu kungabandakanya ukusungula ukusetshenziswa, ukusatshalaliswa, ukukhethwa, ukucwaningwa kwamabhuku, nezinye izinqubomgomo, kanye nokuqeqeshwa konjiniyela, ukuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho, kanye nokukhuthaza nokwakha ukuzibandakanya komphakathi okuzuzisa inhlangano ngamasu."
Imisebenzi yeHhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile
Ngokusho kwe- Iqembu TODO, okujwayelekile imisebenzi of a Izinhlelo zeHhovisi Lomthombo Ovulekile Zingahlukaniswa ngezigaba ezintathu ezilandelayo:
Ukunciphisa ubungozi kwezomthetho
I-Las «I-OSPO» bavame ukwengamela izici zenqubo yokulandela ilayisense yenkampani evulekile yomthombo. Izinkampani ezisabalalisa isoftware zivame ukukhathazeka kakhulu ngalokhu bese ziqala ezazo «I-OSPO» maqondana nokuncishiswa kwengozi esemthethweni. Ngakho-ke, izibopho ze- «I-OSPO» kule ndawo kufaka okulandelayo:
Gcina ukubuyekezwa nokuqapha ukuhambisana kwamalayisense womthombo ovulekile.
Qalisa inqubo yokubuyekeza yokusetshenziswa kwekhodi engenayo.
Qinisekisa ukuthi inkampani inikela ekuvuleni amaphrojekthi womthombo ngempumelelo.
Ukwenza ngcono imikhuba yonjiniyela
I-Las «I-OSPO» Imvamisa bathuthukisa amakhono onjiniyela ngokunikeza ukuholwa nezinqubomgomo zokuphatha ikhodi endaweni yemithombo evulekile (futhi exubile). Izinkampani ezinonjiniyela abaningi be-software zigxila ku- «I-OSPO» kuzinqubomgomo nemikhuba yobunjiniyela. Ngakho-ke, izibopho ze- «I-OSPO» kule ndawo kufaka okulandelayo:
Xoxa ngokusobala isu lomthombo ovulekile ngaphakathi nangaphandle kwenkampani.
Khuthaza isiko lomthombo ovulekile ngaphakathi kwenhlangano.
Qinisekisa ukukhishwa kwekhodi kaningi nekhwalithi ephezulu emiphakathini yemithombo evulekile.
Ukuthola izinzuzo zezezimali
Njengoba ezinye izinkampani zigxila kumthelela wezezimali woMthombo Ovulekile, zivame ukusizakala ngakho «I-OSPO» ukusiza ukuqhuba isu elizungeze ukusetshenziswa kwabahwebi uma kuqhathaniswa nabahlinzeki bomthombo ovulekile Ngenkathi abanye besebenzisa eyabo «I-OSPO» (namaphrojekthi wemithombo evulekile) ukushayela amakhasimende kumikhiqizo yezentengiso. Ngakho-ke, izibopho ze- «I-OSPO» kule ndawo kufaka okulandelayo:
Ungumnikazi futhi ugade ukwenziwa kwesu.
Ukwenza lula ukusetshenziswa okusebenzayo komthombo ovulekile emikhiqizweni nasekuthengisweni kwezebhizinisi.
Xhumana nemiphakathi yonjiniyela ukukhuthaza ukwamukelwa kwamaphrojekthi wemithombo evulekile yamasu.
Kodwa-ke, njengoba kunengqondo ngakunye Izinhlelo zeHhovisi Lomthombo Ovulekile wenhlangano ngayinye, iyohlala igcina ngokulungiswa ngokwezidingo zayo, futhi ngokuya ngemodeli yayo yebhizinisi, imikhiqizo nezinhloso ezithile.
Ngeminye imininingwane esemthethweni ku- «I-OSPO», ungavakashela amakheli ewebhu alandelayo: Isixhumanisi se-1, Isixhumanisi se-2 y Isixhumanisi se-3.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «OSPO (Open Source Program Office)», okuwumbono (isinyathelo / iphrojekthi) ye- Iqembu le-TODO (Khuluma ngokukhululekile Thuthukisa ngokusobala) esivuna ukudala indawo ye-IT yamahhala futhi evulekile ngaphakathi kwenhlangano ngayinye yokuphathwa kweFree and Open Software kuzo; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-OSPO: Ihhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile. I-Idea yeqembu le-TODO
Ama-Distros we-GNU / Linux angaziwa kakhulu hhayi ku-DistroWatch - Ingxenye 2